မိုင်းတွင်း။ ines Minesweeper ကစားနည်း။ Emulator.online
မိုင်းတွင်း။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ Minefield ဟာ Windows သုံးဆယ့်တစ်ဆယ့်တစ်ဆယ့်ကိုးနှစ်မှာပဲ Windows ထဲကို ၀ င်ခဲ့တယ်။ ၎င်း၏ interface သည်နှစ်များတစ်လျှောက်အပြောင်းအလဲများစွာရှိခဲ့သော်လည်းဂိမ်းစက်ပိုင်းသည်နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်သင်စိတ်ဝင်စားသောအတိအကျဖြစ်သည် - သင်၏ယခင်အတွေ့အကြုံများကသင့်ကိုအလွန်ကောင်းသောရလဒ်များမဖြစ်စေသောကြောင့် Minesweeper ကစားနည်းကိုသင်အသေးစိတ်နားလည်လိုသည်။
အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ကသူတို့၏ဘ ၀ တွင်မည်သူမဆိုကစားခဲ့ဖူးသောထိုဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်ရှစ်မတိုင်မီအထိထည့်သွင်းခဲ့ပြီး Microsoft က၎င်းအားဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် တယောက်တည်းသော နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်ကြိုတင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သောအခြားဝါသနာများ။ အချို့က၎င်းကိုခေါ်ကြသည် မိုင်းကွင်းအမှန်မှာ၊ ဤသည်သည် (ပိုမိုနိုင်ငံရေးအရသင့်လျော်သော) ဂိမ်း၏ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၀ င်းဒိုး ၇ နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့်တူညီသောထူးဆန်းသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာ touch-friendly ဖြစ်တဲ့ Windows XNUMX store မှာ Minefield အခမဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအကြောင်းပြောပြီး Minefield ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်၊ ဘယ်လိုကစားရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြသွားမယ်။ သင်၏တိုးတက်မှုကိုမျှဝေရန် Xbox Live နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဒါကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ တကယ်လို့သင်မကျေနပ်လျှင် PC, smartphone နှင့် tablet အတွက်မှန်ကန်သောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုသင့်အားအကြောင်းကြားမည်မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်ရတာပျော်ရွှင်ပြီးအားလုံးအထက်ကပျော်မွေ့ပါစေ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှဖြန့်ချိသောဂိမ်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းတွင် ၂ မျိုးကိုရနိုင်သည် ဂန္ထဝင်, အရာသစ္စာရှိစွာ Prato fiorito ၏ပိုင်ထိုက်သောမျိုးပွားနှင့်အရာ အဖြစ်အပျက် အရာ, အခြားတစ်ဖက်တွင်အသစ်သောအထူးသဖြင့်တွေ့ရမယ်။ ပထမတစ်ခုနဲ့စကြရအောင်။ ဒီတော့ဒီလမ်းညွှန်ကိုဖတ်တယ်။
En ရိုးရာမိုင်းကွင်း တစ်ဇယားကွက်ရှိပါတယ် ဖုံးအုပ်သေတ္တာများ, ၎င်းသည်မိုင်းများကိုဖုံးကွယ်နိုင်သောနေရာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အနိုင်ရရန်၊ သင်သည်အချည်းနှီးသောစတုရန်းတစ်ခုစီကိုဖြစ်နိုင်သမျှအချိန်တိုအတွင်းဖျက်ပစ်ရမည်။ ဒီဗားရှင်းမှာတော့မိုင်းတွေအစားမင်းသမီးတွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်စစ်ဆင်ရေးကမပြောင်းလဲဘူး။ ရင်ပြင်များကိုကလစ်တစ်ချက် (သို့မဟုတ်အသာပုတ်ပါ) ဖြင့်ဖျက်ပစ်ခြင်းအပြင်၊ သတ္တုတွင်းကိုဖုံးကွယ်နေသည်ဟုသင်ထင်သောသူများအားအမှတ်အသားပြုပြီးသူတို့ကိုမပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါ။
သင်ကတစ်ခုထည့်နိုင်သည် အနီရောင်အလံ မောက်၏ညာဖက်ကလစ်သို့မဟုတ်ရှည်လျားသောထိတွေ့မှုရှိသည့်ဤအကွက်များတွင်အလံများအစားဤလုပ်ဆောင်မှုကိုထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ပါ အဝါရောင်မေးခွန်းအမှတ်အသား ၎င်းသည်ရွေးချယ်ထားသည့်ကြွေပြားများကို "သော့ဖွင့်" ပေးပြီးသင်အားလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်။ အနိုင်ရရန်အတွက်သင်သည်သတ္တုတွင်းတစ်ခုမပါသည့်စတုရန်းတစ်ခုချင်းစီကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
ရွေးချယ်ရန်ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့် ၃ ခုရှိသည် - အစပြုသူ, အလယ်အလတ် y အဆင့်မြင့်။ ၄ င်းတို့ကိုခွဲခြားရန်ဇယားကွက်ရှိရင်ပြင်နှင့်မိုင်းအရေအတွက် - ပထမကိုးတွင်ကိုးခုကိုးမိုင်၊ ၁၆ ခု၊ ၁၆ ခုနှင့်ဒုတိယတွင် ၄၀၊ သင်နှင့်အတူအဆင့်တစ်ခုကစားရန်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည် ထုံးစံ Grid, ဘယ်မှာထဲမှာရှိသည်ဖို့အကွက်ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုရွေးပါ altura, ကျယ်ပြန့် နှင့်မိုင်းအရေအတွက်သို့မဟုတ် မင်္ဂလာပါ။ ပထမရှစ်×ရှစ်မိုင်းကွင်းအပြောင်းအလဲသည်အခမဲ့မဟုတ်တော့ပါ။
အခမဲ့သေတ္တာများအများစုသည်ဗလာဖြစ်နေသော်လည်းအချို့မှာaရှိသည် နံပါတ် 1 မှ 6ဤဒေသတွင်မိုင်းများမည်မျှရှိသည်ကိုဖော်ပြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တန်ဖိုးရှိသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အတွင်းနံပါတ်မရှိသောသူများဘေးတွင်ရှိသည့်အကွက်များကိုဖျက်ပစ်ခြင်းသည်ငါးသို့မဟုတ်ခြောက်ခုမှဘေးနံပါတ်များကို“ အန္တရာယ်ရှိသော” အဖြစ်မှတ်သားခြင်းဖြစ်သည်။ Minefield ကိုအနိုင်ယူရန်အခြားထူးခြားသောအကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်များမရှိသောကြောင့်ထို့အပြင်သင်၏ကံကြမ္မာအပေါ်မှီခိုရမည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ပဟေgameိဂိမ်းပါ။
mode ကို အဖြစ်အပျက် ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရိုးရာမိုင်းရှင်းလင်းသူ၏ထူးခြားမှုအချို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ဤတွင်သတ္တုတွင်းတူးသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (အဆက်မပြတ်ကိုယ်စားပြုသောတစ်ခုချင်းစီ) ကို ဖြတ်၍ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိသေတ္တာများကိုတူးဖော်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ သတ္တုတွင်းတွေအစားထောင်ချောက်တွေကိုဝှက်ထားတယ်။ မင်းဟာဘဝ ၃ ခုနဲ့စပြီးနှလုံးသားတွေကိုစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ပိုပြီးဝင်ငွေရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဒင်္ဂါးပြားရမှတ်တိုးမြှင့်။
စွန့်စားမှု mode သည်အစဉ်အလာထက် "စိတ်ရှုပ်စရာ" နည်းပြီးသင်ထောင်ချောက်ကိုရှာလျှင်သင့်အနေနှင့်အဆင့်ကိုဖြည့်ရန်အတွက်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ ခုကျန်သေးသည်။ ဝင်္ကပါတံခါးများသော့ဖွင့်ရန်ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်အခြားစုစည်းပစ္စည်းများရှိနေခြင်း (ဆက်လက်အတွက်)အဖြစ်အပျက်) ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချစေသည် - အချိန်တိုင်းသော့ဖွင့်ထားသောသေတ္တာများသည်အနီးအနားရှိထောင်ချောက်များ၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ စက်ပြင်များသည်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဒင်္ဂါးပြားများအပြင်, မိုင်းလုပ်သားစုဆောင်းနိုင်ပါတယ် ကိုရွှေ bullion y armas ပြိုင်ဘက်များကိုသတ်ပြီးသင်၏လမ်းကြောင်းတွင်ထောင်ချောက်များကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါ။ ဤလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီသည်ဂိမ်း၏ရမှတ်တိုးပွားစေသည်။ အလံများ၊ မေးခွန်းအမှတ်အသားများမပါရှိပါကအနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်လက္ခဏာများရှိသည် အာမေmarkိတ်အမှတ်အသား၊ ရည်ရွယ်ချက်တူတူရှိပြီးညာဖက်ကလစ် (သို့) ရှည်လျားသောထိတွေ့မှုဖြင့် activate လုပ်သော။
Minefield သည်အချို့ကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားသောကြောင့်အသစ်တစ်ခုသည်ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်မသွားပါ နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများ သူတို့ကအစဉ်အလာစုံလင်တဲ့ပုံစံပေါ်အခြေခံပြီးသင်ကစားပွဲအတွက်သုံးစွဲနိုင်တဲ့အပိုဆုကြေးများအတွက်လစဉ်ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုတက်ခွင့်ပြုပါ။ ဤနေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများကိုဂိမ်း၏အဓိကစာမျက်နှာမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်စွက်ရန်အဆိုပြုထားသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုတွင်သတ္တုတွင်း ၁၀ ခုကိုအလံများဖြင့်အမှတ်အသားပြုရန် (အခြားမည်သည့် box ကိုမဆိုမထုတ်ဘဲ) နှင့်အခြားတစ်ခုသို့ခြေလှမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ မိုင်း။
စိန်ခေါ်မှုများသည်လစဉ်တိုးတက်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကြေးဝါ၊ ငွေ၊ ရွှေ၊ ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်သည် Classic mode ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် - သင်သည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်သည် အစပြုသူ, အလယ်အလတ် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူ.
အထူးသဖြင့်ဂိမ်း၏ပရီမီယံဗားရှင်းကိုရည်ညွှန်းသည့်ထူးခြားသောဆုများအပြင် (မကြာမီကျွန်ုပ်ပြောမည်) အဓိကအချက်သည်ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်များ Xbox Live
ဟုတ်တယ်၊ Minefield ကို Microsoft console များတွင်ကစားလို့မရပါ။ သို့သော်သင်၏ Xbox Live အကောင့်တွင်ရမှတ်များရနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုပြောရန်လုံလောက်ပြီ။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Minesweeper ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုနားလည်ရန်အချိန်ကျပြီ။
ယခုငါအချို့ဖော်ပြရန်သွားနေပါတယ် မိုင်းကွင်းအစားအခြားရွေးချယ်စရာများ Microsoft Minesweeper ကိုသင်မကျေနပ်လျှင်ရွေးချယ်ရန်။
မိုင်းရှင်းလင်းသူ - အခြေခံလိုအပ်ချက်များ (Windows XNUMX)
ငါအဆိုပြုထားပထမရွေးချယ်စရာ option ကိုဖြစ်ပါတယ် မိုင်းကွင်း - အခြေခံလိုအပ်ချက်များတရားဝင် ၀ င်းဒိုးစတိုးတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ခလုပ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည် ရယူ။ ဂိမ်းများတွင်မည်သည့်ထပ်ဆင့်ဝယ်ယူမှုများနှင့်ကြော်ငြာများမရှိပါ။ သို့သော်စွန့်စားမှု mode တစ်ခုပျောက်နေသည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရှုပ်ထွေးမှုအဆင့် (၃) ခုနှင့်အဆင်ပြေသောအဆင့်တစ်ခုနှင့်အတူရိုးရာပန်းပွင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဖြစ်သည်။
Grid များ၏အတိုင်းအတာများနှင့်အဆင့်တိုင်းတွင်ရှိသောမိုင်းအရေအတွက်သည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Minefield နှင့်တူသည်။ Grid ၏စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်တူညီသောတန်ဖိုးများကိုလည်းပေးထားသည်။ ဤနေရာတွင် modes များအကြားသင်ရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့်အမည်များပြောင်းလဲသွားသည်။ လွယ်ကူသော, မီဒီယာ သို့မဟုတ် ခက်ခဲ။ in ရွေးချယ်မှုများ ဂိမ်း၏ဂရပ်ဖစ်နှင့်စိတ် ၀ င်စားသောအသံ၊ အသံနှင့်မကြာခဏမေးမြန်းသောအမှတ်အသားနှင့်ပတ်သက်သောအချို့သောထိန်းချုပ်မှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်ခေါင်းစဉ် ၃ ခုကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ခေါင်းစဉ်ကတိတော်များအရ၎င်းသည်အမှန်တကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဒီမိုင်းကွင်းဟာစနစ်တစ်ခုပေးထားပါတယ် စာရင်းအင်း ဂိမ်းများတွင်ရရှိသောရမှတ်များတွင်သင် Xbox Live နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မျှဝေရန်သင် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ အကယ်၍ သင်သာ Prato Fiorito ကိုကစားလိုလျှင်၎င်းသည်ပြaနာဖြစ်နိုင်သည်ဟုမထင်ပါ။ ဂိမ်းစက်ရုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လှုပ်ရှားမှုများသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဂိမ်းနှင့်ဆင်တူသည်။ လေးထောင့်ကွက်များကိုလွှတ်ရန်နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိခြင်း၊ ညာခလုတ်သို့မဟုတ်ရှည်သောထိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေး၊ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်လည်းတကယ်ကိုတော်တော်လေးဖြစ်ကြသည်။
မိုင်းရှင်းလင်းသူ (Windows ten)
ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတင်ပြတဲ့ဒုတိယရွေးချယ်စရာကတော့ မိုင်းရှင်းလင်းသူဒါဟာတကယ့်လွမ်းဆွတ်သတ္တုတွင်းကွင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဂရပ်ဖစ်များသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဂိမ်းသည်ဝင်းဒိုးအတွက်မူရင်း၏ထူးခြားချက်များကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်စတိုးတွင်အမြဲတမ်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတွေ့နိုင်သည်။
၄ ခု (အမြဲတမ်းနှင့်အခြေအနေအားလုံးတွင်ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်) ၄ ခုရှိသည် လွယ်ကူသော, medio, ခက်ခဲ y အိပ်မက်ဆိုး။ ဤနေရာတွင်အတိုင်းအတာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖြန့်ချိမည့်ပုံးအရေအတွက်သည်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
ရိုးရှင်းသောပြီးပြည့်စုံသော mode တွင်၊ ဇယားကွက်သည်ရှစ်×ကိုးနှစ်ထပ် ရှိ၍ ၁၀ မိနစ်ရှိသည်။ 10x12 အလယ်မှာမိုင်းနှစ်ဆယ်နဲ့; မျှမျှတတခက်ခဲသောတဆယ့်နှစ်ဆယ့်လေးပါးတွင်မိုင်းသုံးဆယ်နှင့်နှင့်အိပ်မက်ဆိုးအိပ်မက်ဆိုးတွင် ၁၃ ခုမှ ၁၅ ခုတွင်မိုင်းလေးဆယ်ပါဝင်သည်။ ဂိမ်း၏စက်ပြင်သည်မူလဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကလစ်သို့မဟုတ်မဆိုသက်ဆိုင်ရာအကွက်ကိုသံသယရှိသူများကိုမှတ်သားနိုင်ခြင်းမရှိပဲထုတ်လွှတ်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းကိုအီတလီသို့ဘာသာပြန်ထားသောပေမယ့်အတွက် setting များကို ဘာသာစကားသို့မဟုတ်ဝင်းဒိုးနောက်ခံကိုလည်းသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဝင်ရောက်ရန်အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်သာနှိပ်ပါ အခန်း အရာအောက်ပိုင်းအလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိ၏။
သင် Mac သုံးပါက Minefield ကိုကစားနိုင်ပြီး Mac App Store မှနာမည်တူအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တပ်ဆင်နိုင်သည် ရယူပါ, ညာဘက်အထက်ပိုင်း၌တည်ရှိခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကမှတဆင့်သူ့ဟာသူ authentication စကားဝှက်ကို သင်၏ Apple ID or touch ကို ID ကို (အကယ်၍ သင်၏ Mac ၌လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာရှိပါက)
အဆိုပါဂိမ်းသည်ရိုးရာသတ္တုတွင်းကွင်း၌တူညီသောအရာဖြစ်ပြီး ၁၀ × ၁၂ နှင့်မိုင်းနှစ်ဆယ်ပုံစံရှိသည်။ ဂိမ်းချိန်ညှိချက်များကိုညှိရန်သင်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ရမည် အခန်း အောက်ပိုင်းအလယ်ဗဟိုမှာတည်ရှိပြီးအချက်ကိုရွေးချယ်ပါ setting များကို ဖွင့်လှစ်သောမီနူးကနေ။
Minesweeper Online ကစားနည်း
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် Minesweeper ကိုကစားခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ထိုဂိမ်းအတွက်နေရာလွတ်ယူရန်မလိုတော့ပေ။ ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့အွန်လိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ကစားတာလဲ။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်လုပ်နိုင်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတော်များများရှိတယ် - သူတို့ထဲကတခုကတခုဖြစ်တယ် အွန်လိုင်းသတ္တုတွင်း အရာလည်းစတိုး App ကိုတစ် ဦး ပေးဆောင်ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ ငါပြောတာက Windows အတွက်မူရင်း minefield ကဲ့သို့တူညီသောဂရပ်ဖစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဒီနေရာဟာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပေမယ့်သင်ကစားရမယ့်ဘာသာစကားကိုမသိရသေးပါဘူး။ Grid များသည် Microsoft Minesweeper ၏စံအတိုင်းအတာများရှိသည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် juego, ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးတွင်တည်ရှိပြီးသင်ရွေးနိုင်သည် အစပြုသူ, အလယ်အလတ် y ကျွမ်းကျင်သူ, Beginner, အလယ်အလတ်နှင့်အထူးကုနှင့်ကိုက်ညီသော။ ထုံးစံ သင်သတ်မှတ်နိုင်သောပြီးပြည့်စုံသောအဆင်ပြေသော mode အတွက်ဖြစ်သည် altura (အမြင့်) ကျယ်ပြန့် (အကျယ်) နှင့်လည်း မိုင်း (မိုင်း) markingaကုန်အမှတ်တံဆိပ် သင်၏ site ပေါ်တွင်မေးခွန်းအမှတ်အသားကိုဖွင့်ပါ။
ဂိမ်းစက်ပြင်များသည်ရင်ပြင်များကိုလွှတ်ရန်ဘယ်ဘက်ခလုတ်ကိုကြို။ ကြိုတင်မှတ်သားရန် - ကိုနှိပ်ပါ ထိန်းချုပ်မှု သင်၏ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ ဒီ option ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ပြသ အဲဒါကသင့်ကိုအကြမ်းအားဖြင့်ရာနှုန်းကနေနှစ်ရာရာနှုန်းအထိခန့်မှန်းလို့ရတယ်။
ည mode အစား၊ ထိုနေရာ၏နောက်ခံကို ပြောင်းလဲ၍ တစ်ညလုံးစွမ်းအင်ချွေတာရန်ပြတင်းပေါက်မှတောက်ပမှုကိုလျှော့ချပါ။
ကောင်းပြီ၊ ငါ Minefield ကိုကွန်ပြူတာနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်မည်သို့ကစားရမည်ကိုရှင်းပြခဲ့သော်လည်းသင်လုပ်လိုသည်ဆိုပါက စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်? စိတ်မပူပါနဲ့ Android နဲ့ iOS မှာပါကစားနိုင်တဲ့အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့ကအရက်ဆိုင်တွေပြုပြင်တယ်။
မိုင်းရှင်းလင်းသူ: စုဆောင်းသူ (Android / iOS) - အစဉ်အလာမိုင်းခွဲခြားမှုပုံစံ၊ ရင်ပြင်များသို့မဟုတ်စတုဂံများမဟုတ်သောပုံသဏ္grာန်များထားရှိခြင်းအပြင်အဆင့်များနှင့်စုဆောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
ကမ္ဘာကြီး (Android / iOS) - ရှုထောင့်နှစ်ခုသုံးဘားကိုငြီးငွေ့? ဤလျှောက်လွှာဖြင့်သင်သည်နယ်ပယ်များနှင့် Cube များတွင်ကစားနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုများအတွက်လုံးဝ Minefield တစ်မူကွဲ။
မိုင်းကမ္ဘာ (Android / iOS) - ပထဝီအနေအထားကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်သည့်ဤမိုင်းကွင်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာမြေ၏မြေပုံများပေါ်ရှိမိုင်းများကိုရှောင်ကွင်းနိုင်သည်။
Windows 10 တွင် Minefield ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ငါကစားရန်သင်ယူ, ကရှင်းပြဖို့အချိန်ပါပဲ Windows 10 တွင် Minefield ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ ဒီဂိမ်းကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်လည်ပတ်မှုစနစ်စတိုးတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်ရန်မှာအပြာရောင်ခလုတ်ကိုစာဖြင့်ရေးသားရန်ဖြစ်သည် ရယူ တရားဝင် Microsoft Minesweeper စာမျက်နှာပေါ်တွင်။
ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်းအပလီကေးရှင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်တပ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်သော့ဖွင့်နိုင်သည်အပိုပေးဆောင်ထားသောအကြောင်းအရာများရှိသည် - သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းခြင်း တစ်ရာလေးဆယ်ကိုးယူရိုသို့မဟုတ်တစ်နှစ်အတွက်ယူရို ၉.၈၉ ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဂိမ်းထဲမှာနဖူးစည်းစာတန်းများပါဝင်သည်နှင့်သင်ဖျက်ပစ်လို့မရဘူးစက္ကန့်အနည်းငယ်၏မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်သင့်အားကြိုတင်ခိုင်းစေ။ သင်ကျော်လွှားရန်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာ subscribe လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အခကြေးငွေပေးသွင်းရမည့်အကျိုးကျေးဇူးများမှာအပိုဒင်္ဂါးများ (စိန်ခေါ်မှုများအတွက်) နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောစွန့်စားမှုစနစ်အတွက်သီးသန့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
သူကပြောပြီးအရေးယူကြပါစို့။ Download ပြီးပြည့်စုံစွာစတင်ပါ Microsoft Minesweeper Start menu ထဲက icon လေးကနေတစ်ဆင့်ဂိမ်းတစ်ခုစတင်ပါ ဂန္ထဝင် mode ဒါမှမဟုတ် စွန့်စားမှု modeထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးသောအဆင့်ရှိသက်ဆိုင်ရာအကွက်များကိုနှိပ်ပါ။ အစပြုသူ, အလယ်အလတ် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူ.
ညာဘက်အပေါ်ထောင့် ၂ ခုပါသောအိုင်ကွန်မှတစ်ဆင့်မြင်ကွင်းအပြည့်ဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သည့်အဓိက Minefield ၀ င်းဒိုးကိုအလျားလိုက် scroll လုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုဘယ်ဘက်သို့လှိမ့်ခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းများနှင့်အောင်မြင်သော Xbox Live ရည်မှန်းချက်များအပေါ်ကိန်းဂဏန်းများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မင်းရွှေ့နိုင်တယ် themes များ ပရီမီယံပေးဆောင်သောဗားရှင်းဖြင့်သာ - အခြေခံဗားရှင်းတွင်မူရင်းတစ်ခုသာပေါ်သည်။
သို့သော်၊ မိုင်းကွင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ရှုရန်၊ ဘယ်ဘက်အပေါ်ရှိအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပြီးအချက်ကိုရွေးချယ်ရမည် setting များကို သင်မှအဆိုပြုထားသောမီနူးမှဤသည်ကိုသင်ချိန်ညှိနိုင်သည့်ဘေးထွက် panel ကိုဖွင့်လိမ့်မည် ဂိမ်းရွေးချယ်စရာများ.
သင်သည်အသံပမာဏကိုချိန်ညှိနိုင်ပြီးသတိပေးချက်များကိုသက်ဝင်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ i ကိုအသုံးပြုရန်မသုံးသည်ကိုချက်ချင်းရွေးနိုင်သည် မေးခွန်းအမှတ်များ။ သင့်ကွန်ပျူတာကခွင့်ပြုပါကသင်လည်းချိန်ညှိနိုင်သည် တို့ နှင့် ဂရပ်ဖစ် ပြောင်းလဲမှုကိုသင်လုပ်နိုင်သည် အစာရှောင်ခြင်း mode ကို နှင့် / သို့မဟုတ်ပညတ်တော်တို့ကို ရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်အတွက် settings ကို restore ပြန်ရွေးချယ်နိုင်သည် default settings ကို သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းများပြန်လည်သတ်မှတ် ဂိမ်း။
ငါအာရုံစူးစိုက်ချင်ပါတယ်တစ်ခုမှာနောက်ဆုံးရှုထောင့်။ Xbox Live- သင်၌ Xbox console ရှိသောကြောင့်ပရိုဖိုင်းကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးသားဖြစ်ပါက၊ သင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲပြီးဆုံးသွားသောအခါ desktop ပေါ်တွင်သင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ သင့်တွင်အကောင့်မရှိသေးပါက၎င်းကိုအကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပါကမှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံမပေးပါ။